रुकुम घटना को दोषिलाई कार्वाही नभए जनकारबाही गरिने छ - HimalDarpan
दिपक विश्वकर्मा । जाजरकोट भेरी नगरपालिका– ४, रानागाउँ निवासी २१ वर्षीय नवराज विक प्रेमिकासँग बिहे गर्न १९ जना साथीसहित शनिबार अपराह्न करिब ५ बजे रुकुमको चौरजहारी पुगे पछि यो घटनाले अर्कै मोड लिएको हो । परिवारको सहमतिमा बिबाह सफल हुन नसकेपछि भागेर बिबाह गर्ने सहमति भए अनुसार नबराज विक आफ्ना आफन्त र साथीहरू लिएर जाजरकोटबाट पश्चिम रूकुम पुगेका थिए ।
आफूले मन पराएको केटीसँग घरजम गरेर बस्‍ने नबराजको सपनामाथि धोका भएको छ । स्थानीयले संगठित आक्रमण गरेपछि भाग्दाभाग्दै नवराज लगायत नदीमा हामफालेका ४ जना यूवाहरुको ज्यान गएको छ।
गाउँलेले ढुंगामुढा गरेर लखेटेपछि ज्यान जोगाउन भेरी नदीमा हामफालेका चारजनाको शव फेला परेको छ भने, दुई जना अझै बेपत्ता नै छन् । रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका– ८, सोतीमा कथित माथिल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम बिहे गर्न जाजरकोटबाट आएका दलित युवा र उनका साथीहरूको समूहलाई स्थानीयले भारतीय साउथ फिल्मी शैलीमा अन्धाधुन्द आक्रमण गरेका थिए । आफ्नो ज्यान जोगाउन नदीमा हामफाले पनि गाउँलेहरु ले ढुंगा प्रहार गरेर ति यूवाहरुलाई मारेका छन् । स्थानिय समुदायका कथित उपल्ला जातिका मानिस भनौंदाहरूले निर्ममता पुर्बक हत्या गरेका छन्।
रूकुममा घटेको यो घटनाले सिङ्गो नेपाली दलित समुदायलाई नै पिडित र आक्रोशित बनाएको छ भने दलित समुदाय प्रतिको शासकिय चरित्र थप उदाङ्गो भएको छ। कथित जाति ब्यबस्थाका कारण उत्पिडित दलित समुदायले कहिले सम्म मृत्युको सामना गरिरहनु पर्ने हो ?
कथित उच्च जातिय अहंकारका कारण दलित युवा युवतिले आफ्नो प्रेमभाब प्रकट गर्दा मुत्युको बरण गर्नु पर्ने यो कस्तो बिडम्बना ? दलित समुदाय माथि हत्याको श्रीङ्खला कहिले अन्त्य हुन्छ सरकार ? कथित जातिय प्रेममाका कारण दलित युवाले मृत्यु बरण गर्न परेको पहिलो घटना भने होईन। २०७३ साल असारमा काभ्रेका युवा अजित मिजारले सोहि गाँउकी गैरदलित युवतीसँग प्रेम बिबाह गरेकै कारण अजित मिजारलाई केटी पक्षका परिवार र आफन्तले धादिङ्ग जिल्लाको गजुरी नजिकै लगेर हत्या गरेका थिए ।
२१ शताब्दिको यो आधुनिक युगमा हाम्रो समाज कता जाँदै छ ? मानिस मानिस बिचको यो असमानता र बिभेद कहिले हट्ने ? दलित समुदायले आम नागरिक सरह बाँच्न पाउने अधिकारको सुन्श्चितता कहिले हुन्छ ? यी तमाम प्रश्नको जबाफ दिने जिम्मेवार निकाय को हो ? समतामुलक राष्ट्रको परिपकल्पना गर्ने मेरो सरकार यहि शासनसत्ताबाट पिल्सिएको एउटा समुदाय माथि दैनिक जसो अत्याचारले पराकाष्ठ नाग्दा पनि सत्ताको सिहासनमा ति शासक बर्गले के हेरिरहेका छन् ।
कथित उपल्लो जातिकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यामा महिनौ सम्म सडकमा तान्डब देखाउनी मानबअधिकारबादीहरू आज निम्छरो दलित युवा मर्दा कुन दुलो पसेर डलरको नोट गन्दै छन ? यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिक को बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्दछ। तर बिडम्बनाको बिषय के हो भने यो नियम दलित समुदायको हकमा किन लागु भएन ? दलित कहिले होटलको चुलो छोईएको निहुमा मर्नु परेको छ। कहिले धारा छोएको निहुँमा मर्नु परेको छ। कहिले मन्दिर प्रबेशको कारण मर्नु परेको छ। कहिले कथित उल्लो जातिसँगको प्रेम सबन्धकै कारण मर्नु परेको छ।
रुकुम घटना को दोषिलाई कार्बाही नभए जनकारबाही गरिने छ। सानो जात भएकै कारण सामुहिक हत्या गरिँदा समेत राज्य उदासिन हुनुले यो मानबता बिरोधी अपराध को पराकास्ट हो भन्ने पुष्ठि भयको छ । राज्य समेत संस्थागत रुपमा जातीय विभेदको घटना मा खासै गम्भिर नभएको अनुभुती हुन्छ । दलित समुदायका नेताहरु समेत आफ्नो डम्फु बजाएर औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने गरि कुरा उठाए जस्तो गर्ने र निर्णायक दबाब दिन नसक्ने देखिएको छ । यदि यो घटनाको दोषिलाई कार्बाही राज्यले गर्दै न भने हामी संघबाट गर्न तयार छौं।
च्याम्पियन्स लिग: अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा आज बार्यन म्युनिख र लाजियो भिड्दै…
मिथोको दोहोरो ह्याट्रिकमा वालिङको शानदार जित…